कला साहित्य – Page2– Halkaro
यी हुन् नेपाल चीनबीच भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौता
चितवन । सप्तगण्डकी बिम्ब यात्राको आयोजनामा भएको गजल प्रतियोगितामा सप्तगण्डकी बहुमुखि क्याम्पस भरतपुरमा वि.ए तृतिय वर्षमा अध्ययनरत प्रशुना पौडेल प्रथम भएकि छिन् । क्याम्पसमा अध्ययनरत साहित्य प्रेमी विद्यार्थीहरुको समुह बिम्ब यात्राले आज क्याम्पसमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा श्रृगांरिक गजल वाचन गर्दै पौडेल प्रथम हुन सफल भएकि हुन् । यस्तै प्रतियोगिातमा सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा वि.वि.एस द्धितिय वर्षमा […]
चितवन । चितवन शनिबार साहित्यिक कार्यक्रमले ब्यस्त रहयो । निरन्तर साहित्यिक कार्यक्रम भैरहने चितवनमा शनिबार देशैभरका स्रष्टाहरु उपस्थित भएर मुक्तक सुनाए । सयौंको संख्यामा स्रोताहरु टिकट लिएर मुक्तक सुन्न आएका थिए । हाम्रो मझेरी साहित्यिक प्रतिष्ठानले नियमित रूपमा गर्दै आएको टिकटमा मुक्तक शृङ्खला अन्तर्गत दोस्रो चरणको यस कार्यक्रममा आरआर चौलागाई मकवानपुर, लीलाधर पाण्डे रुपन्देही, सरु […]
श्रीमान वीरबहादुर फेरी रंगमञ्चमा आउने
प्रकाशित मिति : २०७४, १० माघ बुधबार
चितवन । गत पुस १९ देखि २४ गतेसम्म चितवनमा मञ्चन गरिएको नाटक श्रीमान् वीरबहादुर पुनः मञ्चन हुने भएको छ । दर्शकको माग बमोजिम नाटक पुनः मञ्चन गर्न लागिएको नाटक निर्देशक तथा परिकल्पनाकार भीष्म जोशीले जानकारी दिनुभएको छ । नाटक माघ १२ देखि १५ गतेसम्म नारायणी कला मन्दिर, नारायणगढमा मञ्चन हुनेछ। रामलाल जोशीको मदन पुरस्कार प्राप्त […]
बलराम स्मृति वाङ्मय पुरस्कार डा.शिवप्रसाद पौडेललाई
चितवन । बलराम वाङ्मय प्रतिष्ठान चितवनले एक विशेष समारोहको आयोजना गरेर डा. शिवप्रसाद पौडेललाई सम्मान एवम् पुरस्कृत गरेको छ । प्रतिष्ठानका संस्थापक एवम् संरक्षक सहप्राध्यापक पूर्णप्रसाद अधिकारीको सभापतित्व तथा प्रा.डा. राजाराम सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा डा. पौडेललाई नगद रु.११ हजार सहित पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिएको थियो । आफ्ना स्वर्गीय पिता बलराम अधिकारीको स्मृतिमा […]
गणेश हस्तकुमारी स्मृति पुरस्कार सुरेन्द्र अस्तफललाई
प्रकाशित मिति : २०७४, ६ माघ शनिबार
चितवन । गणेश–हस्त कुमारी (लक्ष्मि देवी) पन्त स्मृति पुरस्कार २०७४ बाट कवि सुरेन्द्र अस्तफल सम्मानीत हुनु भएको छ । साहित्य संगम चितवनले नेपाली साहित्यको कविता, गजल, निवन्ध लेखनमा क्रियासिल रहि सात्यि क्षेत्रमा पुराएको योगदानको मुल्याङकन गर्दै कवि अष्तफलको हिउको आरोहणका लागि नगद पाच हजार सहित प्रमाण पत्रले सम्मान गरेको हो । शनिबार भरतपुरको विरेन्द्र क्याम्पसको […]
प्रकाशित मिति : २०७४, २ माघ मंगलवार
दोलखा । विष्णुलक्ष्मी साहित्यिक पुरस्कार समितिले यो वर्षको ‘विष्णुलक्ष्मी साहित्यिक पुरस्कार‘ साहित्यकार भोजराज न्यौपानेलाई प्रदान गरेको छ । सोमबार चरिकोटमा आयोजित एक समारोहमा पुर्व मन्त्री आनन्द पोखरेलले न्यौपानेलाई नगद एवं सम्मानपत्रले प्रदान गर्नु भयो । अढाई दशकदेखि नेपाली साहित्यमा क्रियाशिल न्यौपानेका ‘आकाश माथिको देवता’, ‘सपनामाथि उभिएर’ र ‘छुटेको जुत्ता ’ कविता संग्रह प्रकाशित छन् । […]
म अनि मेरो सपना
मैले देखेको सपना, हजारौँ त्यी सपना, नँया नँया सपना, दिनहु परिवर्तित बन्दै आँखा वरिपरि छाइरहने सपना, आँफैले सजाएका सपना, अरुमा देखेर सजिएका सपना । कहिले नर्स बन्ने सपना, कहिले शिक्षिका बन्ने सपना, कहिले आकाशमा उडेर चन्द्रमा छुने सपना, कहिले यहि धर्तीमा बसेर शिखर चुम्ने सपना । सपनै सपनाको महल जहाँ म आँफूले आँफूलाई हरेक दिन […]
सुरेश पाण्डेयका तीन थान गजल
गजल १ निर्दोषीको कानुन भयो म जन्मेको देश भरी!! राक्षस पस्यो सत्ताभित्र न्याय पाउँने कसो गरी!! लोकतन्त्रको ज्ञान छैन उस्लाई बसेको छ माथि! देशमा यस्तो हुनु हुन्न भन्दा पक्राउ गर्छ राती!! कहिले सम्म चल्छ यस्तो अन्याय र अत्याचार!! जनताले बोल्न नपाउँने त्यो कहाँ छर अधिकार! जनताको मानु खाई भन कति गर्छौ चुरीफुरी!! आउँला तिम्रो पनि […]
अनुपम रोशीको मध्यान्तर सार्वजनिक
काठमाडौँ। साहित्यकार अनुपम रोशीको चौथो कृति ‘मध्यान्तर’ कथासंग्रह सार्वजनिक भएको छ । मध्यान्तरको बुधबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँमा वरिष्ठ कथाकार माया ठकुरी, लेखक युग पाठक, उपप्रध्यापक डा. रजनी ढकाल र लेखक केशव सिग्देलले संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका थिए। कथाकार माया ठकुरीले पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै अनुपम रोशीको कथा लेख्ने शैली र भाषा गज्जब रहेको बताइन्। त्यसैगरी […]
अनुनादको लोकार्पण तथा अन्तरक्रिया
चितवन । कविडाँडा साहित्य समाजले लेखक टीकाराम रेग्मीको स्मृतिग्रन्थ अनुनादको आज भरतपुरमा एक विशेष कार्यक्रममा लोकार्पण तथा अन्तरक्रिया गरेको छ । समाजका अध्यक्ष एल बी क्षेत्रीको सभापतित्व तथा प्रसिद्ध निबन्धकार रामबाबु घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा लोकार्पित कृति अनुनादका बारेमा समीक्षक द्वय डा. एकनारायण पौडेल र सूर्यप्रकाश जमरकट्टेलले समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुभएको थियो । समीक्षामाथि द्वारिका […]